Posted: Guraandhala/February 10, 2016 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments
Wayyaaneen humna waraanaa fi humna tikaa ishiitti fayyadamtee uummata keenya hidhaa, dararaa fi ajjeesaa jirtullee, uummatni keenya keessumaayuu ammoo dhalootni Oromoo haaraan kutannoo fi gootummaadhaan qawwee fuuldura dhaabbatanii falmuudhaan seenaa boonsaa hojjechaa jiru. Xayyaara waraanaa fi taankii qabaachuu baanullee, artistootni keenya sirba warraaqsaa kan rasaasa caalan gadibaasuudhaan qabsoo akka ibiddaa boba’aa jirtu kana keessatti gahee guddaa taphachaa fi qooda guddaa gumaachaa jiru. Dhibboota keessaa sirba Sabbonticha keenyaa Caalaa Bultumee kan mata dureen isaa “#OromoProtests | Caalaa Bultumee (Qeerransoo)” jedhu https://www.youtube.com/watch?v=rzLNMoTa8E4 akka fakkeenya tokkootti kaasuun ni danda’ama. Akka hubannoo kiyyaatitti, sirbi kun hangama onnee Oromoo akka tuqu gaafii waan qabuu miti. Asirratti fakkenya kana yoon dhiyeessu kan biraa dagachuu fi tokko kan biraa caalchisuu kiyaa miti. Gaheen artistootni keenya walumaagalatti qabsoo kana keessatti taphatan durumaa kaasee bakkee guddaa waan qabuu dha.
Asirratti kan na dinqu yoo jiraatelle, maaliif sabootni cunqurfamoon kan akka Ogaadee, Sidaamaa, Gaambeellaa faa… callisanii taa’anii nu ilaalanii dha. Isaan hoo maaltu sodaachise? Moo isaanis ammallee tuffii fi/ykn shakkii nurraa qabu? Jaarmayootni saboota kana keessaa bahan kan akka Adda Bilisummaa Biyyoolessa Ogaadeen (ONLF), Adda Bilisummaa Sidaamaa (SNLF) fi kkf. dhiyoo kana ABO waliin tumsa uumanii turan (PAFD). Tumsi jaarmayootaa kun saboota biratti maaliif hin jojjetin? Sabootni kun maaliff waliif hin tumsin? Maaliif wal bira hin dhaabbatin? Yoo Obboleewwan isaanii ilmaan Oromoo hidhamaa, dararamaa, ajjeefamaa jiran kanatti; yeroo sochiin uummata keenyaa yoomiyyuu caalaa cimaa jiru kanatti maaliif sochii kanatti hin hirmaatne? kan jedhan gaafiilee sammuu kiyya keessa deddeebi’anii dha. Yeroo Wayyaaneen waan qabduu fi gadidhiistu wallaalaa jirtu kanatti silaa tumsi saboota hundaatu umurii ishii gabaabsuu danda’a ture. Garuu callisuun kun maaliifi?
Credits/Tags: Featured, Master Plan of Addis Ababa, Oromo Struggle, OromoProtests2015